Kuboshwe 50 emshadweni - Ilanga News
Home Izindaba Kuboshwe 50 emshadweni
Kuboshwe 50 emshadweni
Kusale izibiliboco, kwantaza iveyili kamakoti eseyofakwa evenini
KUBOSHWE izihambeli ebezisemshadweni obuseNseleni, ngaseMpangeni, izolo.
BASHAQWE ngamaphoyisa beqeda ukubopha ifindo likasofasilahlane, sebeqhwakele etafuleni eliwubukhazikhazi umakoti nomkhwenyana eNseleni, ngaseMpangeni, izolo ngeSonto. Baboshwe nabo bonke abantu abebehambele lo mshado.
Laba baboshwa nje, basolwa ngokwephula umthetho obekwe nguMengameli Cyril Ramaphosa wokugonqa kwabantu emakubo izinsuku eziwu-21 ukugwema ukubhebhetheka ngamandla kwesifo, i-coronavirus.
Amaphoyisa namasosha kuthiwa atheleke kwancane indawo etendeni obekushadelwa kulona, ebeligcwele abantu abebemenyiwe emshadweni. Phakathi kwababoshiwe kubalwa nomfundisi obeshadisa laba, ongudokotela esibhedlela saseNgwelezane, eMpangeni.
ILANGA lithole ngemithombo yalo ukuthi amaphoyisa ahletshelwe ngabebebuka lo mshado kule ndawo, kodwa bengahambisani nobekwenzeka, okuyilapho etheleke khona engasadle nkobe zamuntu, kwachitheka izishebo.
Ngokuthola kweLANGA, amaphoyisa ashaqe bonke abebehambele lo mshado.
Kuthiwa ukufika kwamaphoyisa kwenze isimo saba muncu kulo mshado, kwaphazamiseka konke njengoba efike aqala ngokushaqa umakoti nomkhwenyana, abaphosa evenini.
Umakoti ubesadlubhe iveyili yomshado. Kuthiwa abe eseshaqa nabo bonke abantu abebewuhambele, besolwa ngokwephula umthetho.
Usuku lwangeSonto lishone indaba yokuboshwa kwalaba isisabalele ezinkundleni zokuxhumana abantu bekhuluma ngayo, kune-video ebikhombisa umakoti entaza neveyili emhlophe eyongeni emotweni yamaphoyisa.
Izithombe ezithathwe kulo mshado zikhombisa ukuthi izihambeli bezize zahlala ngokuqhelelana ukuze zingasondelani njengoba kunemiyalelo ethi abantu mabangasondelani.
Umthombo uthi bashaqwa ngamaphoyisa nje, izibiliboco bese zidekiwe ukuba zidliwe yizihambeli ebezethamele umshado, okwenze zasala kanjalo ziyiziduli zabasali.
Kuzokhumbuleka ukuthi njengoba izwe livaliwe nje, kuvalwe yonke imicimbi okusho ukuthi ukuhlangana kwabantu benza noma wuhloboluni lwawo (umcimbi) kuwukwephula umthetho.
Njengamanje iNingizimu Afrika iphakathi nazo izinsuku eziwu-21 okuvalwe ngazo izwe kanti abantu kabavumelekile ukuhlangana ngaphandle uma kuwumngcwabo kuphela.
Nakhona umndeni oshonelwe kumele uthole imvume ngaphambi kokufihla futhi kuvumeleke ukuthi umngcwabo uhanjelwe ngabantu abawu-50 kuphela. Kubikwa ukuthi laba bashaqwe bayiswa esiteshini samaphoyisa eMpangeni, lapho bevulelwe khona amacala base benikwa amabheyili ngokwahlukana kwabo.
Ngokusho kwesitatimende esikhishwe wuMasipala uMhlathuze, bangaphezulu kuka-67 sebebonke abantu ababoshwe esontweni lokuqala lokuvalwa kwezwe, kulabo kuthiwa kuhlanganisa abawu-6 abebedayisa utshwala, abawu-7 okutholakale ukuthi bakuleli ngoku-ngekho emthethweni, kwathi abane batholakala bezihlalele benza i-picnic ngaphambi kwe-Richards Bay Civic Centre Park.
Okhulumela lo masipala, uMnu Mdu Ncalane, uthe imeya kulo masipala, uMnu Mduduzi Mhlongo, inxusa abantu abakhe ngaphansi kwalo masipala namaphethelo ukuba benze konke okusemandleni ukugcina nokuhlonipha imithetho ebekiwe.
“Sinxusa bonke abantu ukuba balandele imithetho injengoba ibekiwe. Ucela wonke umuntu ukuba abambe iqhaza angakwazi ukulibamba ekutheni sisebenze ngokubambisana nohulumeni ngoba inhloso wukunqanda ukwanda kwalesi sifo esihlasela umhlaba wonke.
“Njengamanje izinombolo ziyakhuphuka zabantu abathelelekile futhi sesiqalile noku-bona abantu abashonayo, bebulawa yisona lesi sifo okuyinto ebesiyibuka yenzeka kwama-nye amazwe,” kusho uMnu Ncalane.
Uqhube wathi kubalulekile ukuba abantu bakuqonde ukuthi ukuvalwa kwezwe kwenzelwe ukunqadwa ukubhebhetheka kwalesi sifo nokuvikela labo abangakatheleleki ukuba bangabe besangenwa yisona.
Okhulumela amaphoyisa kuzwelonke, uBrigadier Vish Naidoo, usiqinisekisile lesi sigameko, wathi kuboshwe abantu abangaphezulu kuka-50 abebethamele umshado ngecala lokwephula umthetho wokulawula inhlekelele ezweni. Uthi ababoshiwe bazonikwa ibheyili, bavele enkantolo maduzane.
Previous articleKushaqwe utshwala obebudayiswa isinyenyela eDundee
Next articlesiphithanelwa yikhanda isikhulu sekilabhu ye-psl ngeligi